Fandrosoana amin'ny oniversite »Hodges University
Fandrosoana amin'ny oniversite
Ny andraikitry ny departemantan'ny Fampandrosoana ny Oniversite dia ny mamboly fifandraisana amin'ireo alimini, namana, ary ny vondrom-piarahamonina lehibe kokoa ho fanohanana ny iraky ny sekoly hanomanana ny mpianatra hitrandraka fianarana ambony amin'ny ezaka manokana, matihanina ary olom-pirenena. Ireo izay mifandray amin'ny Oniversite Hodges dia mahatakatra fa tena miavaka ity sekoly ity. Izy io dia vondrom-piarahamonina misy karazany maro be feno olona liana sy asa aman-draharaha.
Eto, tsy misy làlana roa mitovy.
Na izany aza, ny marimaritra iraisana mamaritra ny faritaninay, dia ny asa mafy sy ny faniriana hanatanteraka zavatra lehibe, handroso mialoha, ary hamorona fiainana tsaratsara kokoa ho an'ny tenany, ny fianakaviany ary ny fiarahamonina.
Raha vantany vao mifandray amin'ny Anjerimanontolon'i Hodges ianao, dia marika mazava fa mpitondra mandray ny tena fahamendrehana ianao.
Miaraka amin'ny 6,000 mahery ireo nahazo diplaoma, ireo fiaraha-miasa momba ny fanabeazam-pirenena ary ny fifandraisanay B2B, dia manolo-tena hanompo anao tsara izahay aorian'ny fizarana diplaoma na mpiara-miasa amin'ny fiaraha-monina. Ny fiarahanao amin'ny Hodges University dia zava-dehibe aminay, ary te-hihaino anao izahay.
Ny zavatra niainanao, na amin'ny maha-mpianatra na amin'ny maha-namana, dia zava-dehibe amin'ny fitomboantsika sy amin'ny fivoarantsika. Azafady mba tazomy aminay amin'izay ataonao izao sy amin'ny fomba ahitanao izao Oniversite Hodges manamafy ny andraikiny eo amin'ny tontolonao… ary mazava ho azy, mitsidika matetika!
Mpanohana iray ao amin'ny Oniversite Hodges dia mahatakatra fa ny fanomezana dia ny mitadidy ny vokatra farany ao an-tsaina. Io dia ny fanomezana ny fanampiana ilaina, amin'ny fotoana tena sarotra, amin'ny olona iray, hahafahan'izy ireo mamita ny tanjony - tanjona iray izay vato fehizoro hanatsarana ny fiainany sy ny fiarahamonin'izy ireo. Fantatsika rehetra fa ny fanabeazana dia afaka manova fiainana ary ny fanovana dia tsy tonga mora.
Saingy, io mari-pahaizana na mari-pankasitrahana azo io dia tsy azo esorina mihitsy ary ny zava-bitan'ny tsirairay dia namorona mpikambana vaovao ao amin'ny fiarahamonintsika.
Ny fanohananao, izay manana, ary izay no hanova ny làlan'ny fiainana.
Tsy afaka misaotra ny tsirairay avy aminareo izahay noho izany fanohanana izany, nefa fantaro fa hiezaka izahay!
Mialà sasatra! Ary miangavy anao hifandray hatrany!
Raha te hizara ny fikambanan'ny Hodges University anao na hianatra bebe kokoa momba ny fomba ahafahanao manohana mpianatra Hodges University, azafady mifandraisa Angie Manley, Talen'ny Fandrosoana University, 239.938.7728 NA mailaka ao amin'ny amanley2@hodges.edu.
Azafady tsindrio ny rohy etsy ambany mba hampisehoana ny fanohananao anio!